I-China i-Oxygen Oxygen Mask mveliso kunye nabathengisi | IBornun
Isigqumathelo se-oksijini esilahlayo kunye nengxowa yokugcina amanzi zisetyenziselwa izigulana ezifuna isixa esikhulu seoksijini, ukusebenzisa ngokufanelekileyo ioksijini koxinzelelo oluphezulu. Imaski engabuyiseli (i-NRB) isetyenziselwa abaguli abafuna isixa esikhulu seoksijini. Izigulana ezinengxaki yokwenzakala okugwenxa okanye izifo ezinxulumene nentliziyo zibiza NRB I-NRB isebenzisa idama elikhulu eligcwalisa ngelixa isigulana siphuma. Umphunga unyanzelwa ngemingxunya emincinci esecaleni lesigqumathelo. Le mingxuma ivalwa ngelixa isigulana siphefumla, oko ke kuthintela ukuba umoya ongaphandle ungangeni. Isigulana siphefumla ioksijini emsulwa. Ixabiso lokuhamba kwe-NRB yi-10 ukuya kwi-15 LPM.
Isigqumathelo se-oksijini esilahlayo esinezixhobo ezineebhegi zamachibi zisetyenziselwa izigulana ezifuna ioksijini eninzi, ukusebenzisa ioksijini ngokufanelekileyo kuxinzelelo oluphezulu. Imaski engabuyiseli (i-NRB) isetyenziselwa abaguli abafuna isixa esikhulu seoksijini. Izigulana ezonzakeleyo okanye ezinesifo sentliziyo zibiza i-NRB. I-NRB isebenzisa idama elikhulu eligcwalisa ngelixa isigulana siphuma. Umphunga unyanzelwa ngemingxunya emincinci esecaleni lesigqumathelo. Le mingxuma ivalwa ngelixa isigulana siphefumla, oko ke kuthintela ukuba umoya ongaphandle ungangeni. Isigulana siphefumla ioksijini emsulwa. Ixabiso lokuhamba kwe-NRB yi-10 ukuya kwi-15 LPM.
Isetyenziselwa ukuhambisa ioksijini yokuphefumla kwimiphunga yezigulana. Isigqumathelo seoksijini sibonisa imitya yelastiki kunye neziqwengana zempumlo ezinokuhlengahlengiswa ezenza ukuba zilunge ngokugqwesileyo kubungakanani bobuso. I-Oxygen Mask kunye neTubing iza ne-200cm yokuhambisa i-oksijini, kwaye i-vinyl ecacileyo kunye ne-soft inikeza isigulane esikhulu kwaye ivumela ukujonga okubonakalayo. I-Oxygen Mask kunye neTubing ifumaneka ngombala oluhlaza okanye obala.
1.Made grade yonyango PVC.
Iklip yempumlo ehlengahlengiswayo iqinisekisa ukulunga okufanelekileyo.
Umtya weNtloko ye-Elastic yoHlengahlengiso loMonde
Umphetho we-4.Smooth kunye neentsiba zokuthuthuzela isigulana kunye nokunciphisa amanqaku anokucaphukisa
5.Imibala emibini yokukhetha: eluhlaza kunye nebala.
6.DEHP simahla kwaye 100% latex yasimahla iyafumaneka.
Ubude 7.Tubing ungenziwa ngemfuneko.
Ubungakanani: XS, S, M, L, L3, XL
5.bag: 1000ml okanye 600ml
Isiqinisekiso se-6.Quality: CE, ISO 13485
Zonke izinto ezisetyenzisiweyo ekwakhiweni kweMaski ye-Oxygen, kunye ne-Oxygen Tubing ayinasiphelo, ithambile kwaye igudile ngaphandle komphetho obukhali kunye nento, Azinaziphumo zingafunekiyo kwi-Oxygen / Amayeza agqitha phantsi kweemeko eziqhelekileyo zokusetyenziswa. Izinto zeMaski zi-hypoallergenic kwaye ziya kumelana nokutshaya kunye nokukhawuleza ukukhawuleza.
1.Qhoboshela i-oksijini yokuhambisa i-oksijini kumthombo weoksijini kwaye usete ioksijini kukuhamba okuthe ngqo.
2.Jonga ukuhamba kweoksijini kuso sonke isixhobo.
3. Beka imaski ebusweni besigulana ngentambo yelastiki engezantsi kweendlebe kunye nasentanyeni.
4.Tsala ngobunono iziphelo zomtya de imaski ikhuseleke.
5.Mold umtya wentsimbi kwimaski ukuze ulunge impumlo.
Ixesha lokukhokhela: ＜Iintsuku ezingama-25
Indawo yokuQala: Jiangsu China
Nzalo: EO igesi
Umbala: Transperant okanye Green
Egqithileyo I-Nasal Oxygen Cannula-ithiphu ethambileyo
Okulandelayo: Oxygen Vuvu